Madaxweynaha Galmudug oo diiday dalab uga yimid Guddoomiyaha Baarlamaanka - Awdinle Online
Madaxwaynaha Galmudug ayaa diiday dalab kaga yimid Gudoomiyaha Baarlmaaanka oo wajahaya qilaaf kala dhexeeya Xildhibaanada.
Wararka aynu ka helayno xafiiska Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa sheegaya in Madaxwayne QoorQoor diiday dalab Gudoomiyuhu u gudbiyay oo uu ku doonayay in Madaxtooyadu soo dhex gasho buuqa kajiro Barlamaanka, si loo helo gacan sadaxaad oo xalisa qilaafka jira.
Madaxwayne QoorQoor ayaa Gudoomiye Gacal u sheegay in arimaha Baarlamaanka ka dhex jira laga rabo in ay iyagu xalistaan, balse isagu uusan faragalin doonin.
Xildhibaanadii ugu badnaa ayaa isku uruursadey Magaalada Dhuusamareeb, si ay usoo saaraan war culus oo ku wajahan Gudoomiyaha, waana xili Dhuusamareeb ay ka maqan yihiin madaxwaynaha iyo Madaxwayne kuxigeenka Galmudug.
Previous articleTaliyaha Ciidanka AMISOM oo ku dhawaaqay Go’aan ka dhan ah Al-Shabaab
Next articleXal laga gaaray khilaafkii Guddoonka labada Aqal